Tụgharịa asụsụ webụsaịtị WordPress | Gtbabel
Ntụgharị asụsụ na WordPress
Ụzọ kachasị mma iji mee ka saịtị WordPress gị nwee ọtụtụ asụsụ: zuru oke maka ma weebụsaịtị dị mfe na mgbagwoju anya. Site n'enyemaka nke ntụgharị asụsụ akpaghị aka nke ị nwere ike megharịa dịka ịchọrọ.
Tụgharịa asụsụ webụsaịtị gị ugbu a
Ngwa mgbakwunye ntụgharị asụsụ maka onye ọ bụla
Site n'enyemaka nke ngwọta anyị, ị nwere ike ịsụgharị weebụsaịtị WordPress gị n'ọtụtụ asụsụ n'oge ọ bụla. Nke a na-enye gị ohere ịbawanye okporo ụzọ data mba ụwa, rute ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ ma mepee ahịa ọhụrụ: Na-enwetaghị nnukwu ego mmepe ma ọ bụ mgbalị mmezi. Ngwọta anyị na-enye ọrụ mara mma maka ndị mbido na ndị ọkachamara bụ nke abụọ na nke ọ bụla.
Ọkachamara ntọlite ​​​​anyị ga-eburu gị gaa na webụsaịtị ọtụtụ asụsụ n'ime nkeji ise. Enweghị ihe ọmụma mmemme ma ọ bụ mgbanwe na isiokwu gị. Ozugbo edoziri, enwere ike ịtụgharị asụsụ ọdịnaya ọhụrụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na achọrọ gị: ma ị nwere ike itinye uche na ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ.
Na-eburu n'uche ihe niile dị mkpa maka ezigbo, SEO-kacha mma webụsaịtị ọtụtụ asụsụ: Ma ọ bụ nsụgharị nke aha, meta nkọwa, slugs, hreflang mkpado, HTML ogologo àgwà: Google ga-enwe obi ụtọ. Anyị na ndị isi SEO plugins dakọtara.
Enwere ike ịhazi nke ukwuu
Maka ndị ọkachamara niile, anyị na-enye ọrụ dịka ntụgharị XML/JSON, ọkwa email, ntụgharị e-mail/PDF, mbupụ / mbubata n'ọtụtụ ụdị faịlụ, ngbanwe na ọrụ ntụgharị dị iche iche na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enweghị ngwa mgbakwunye ọzọ na ahịa na-enye. .
Atụmatụ ga-akpali gị
Anyị bụ naanị ngwa mgbakwunye na-enye ntụgharị asụsụ akpaghị aka nke ọdịnaya gị dị - na ịpị bọtịnụ. Maka mgbanwe ọdịnaya ọ bụla, ọrụ ngosi email na-akpaghị aka ga-agwa gị mgbanwe niile emere n'asụsụ ala nna. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụlọ ọrụ ọkachamara megharịa ntụgharị asụsụ ndị ahụ, ị ​​nwere ike mbupụ ntụgharị asụsụ akpaka niile n'ụdị dị iche iche wee bubata ha ọzọ na mmetụ bọtịnụ.
Tụnyere plugins ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ
Ịhọrọ nkà na ụzụ ziri ezi dị oké mkpa maka otu nkwụsị na ụgwọ mmepe na-aga n'ihu na ọganihu nke ọrụ ahụ, karịsịa maka nnukwu ọrụ weebụ. Ngwọta nkwụnye nkwụnye etinyere n'ahịa nwere ụzọ nka nka dị iche iche ma na-enwekarị uru na ọghọm. Ngwọta anyị na-ekwenye na njirimara dị iche iche dị elu ma jikọta uru nke ngwọta ngwa mgbakwunye dị na ahịa WordPress.
Gtbabel WPML Polylang TranslatePress Mgbasa ozi ọtụtụ asụsụ GTranslate
Ntụgharị asụsụ akpaghị aka
Tụgharịa asụsụ ibe niile
Enwere ike ịgbasa n'otu n'otu
Nhazi dị elu
Ọchọ na-arụ ọrụ
Ọtụtụ asụsụ isi mmalite
Ntụgharị asụsụ XML
Ntụgharị asụsụ JSON
Backend nchịkọta akụkọ
Onye nchịkọta akụkọ ihu
Ọrụ ntụgharị asụsụ n'otu n'otu
SEO enyi na enyi
Framework nọọrọ onwe ya
Njikwa ntụgharị asụsụ
Ngalaba n'otu n'otu
LP nke obodo akọwapụtara
Ọnụ ego kwa afọ kwa ihe atụ (ihe dị ka.) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
Dakọtara na plugins gị, gburugburu na ọba akwụkwọ
Malite ịtụgharị asụsụ webụsaịtị gị taa
Ma ụlọ ọrụ webụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ntụgharị ma ọ bụ ndị ahịa njedebe: Anyị nwere ngwungwu ziri ezi maka ọnọdụ niile dị na Pọtụfoliyo anyị: Site na ụdị n'efu ruo akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ nkeonwe, nhọrọ niile ghere oghe nye gị - yana ọnụahịa mara mma. Họrọ ngwungwu ziri ezi maka gị wee mejuputa asụsụ multilingualism na webụsaịtị gị taa.
Maka 1 webụsaịtị
1 afọ mmelite
Enyemaka Ntụgharị asụsụ
Ngwá ọrụ ọkachamara
€149 kwa afọ
Uru PRO niile
Mmelite na-akparaghị ókè
Nhazi ngwa mgbakwunye
Maka ọnụọgụ weebụsaịtị ọ bụla